We.com.mm - နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ ဆံပင်အပြင်အဆင်များ
ရာသီအလိုက် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ရှိသလို ရာသီအလိုက် ဆံပင်ပုံစံလေးတွေလည်း ရှိရမှာပေါ့နော်။ နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်ရမယ်၊ ရိုးရှင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဆံပင် ပုံစံမျိုးကို ပြင်ဆင်ကြမလဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆံပင်ရှည်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် ဆံပင်အပြင်အဆင်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အရမ်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်ကြီးတုံးဖွဲ့ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အလွယ်တကူ စည်းပြီး ပွယောင်းယောင်းလေး ထုံးတာမျိုးပါ။ ကြည့်လိုက်ရင် ရှုပ်ပွနေသလိုဖြစ်နေပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆံပင် ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။ သဲတွေ ဖုံတွေကပ်နေလို့ဆံပင်တွေအရမ်းရှုပ်နေရင် ဒီလိုလေးထုံးထားလို့ရပါတယ်။ ပူတဲ့ရာသီနဲ့ဆို ကွက်တိ။
၂. High ponytail
ဆံပင်ကို ခပ်မြောက်မြောက်လေး စုစည်းထားလိုက်တာက လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အပြင် နွေရာသီနဲ့လည်း အတော်ကိုက်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီလိုစည်းတာက ဦးရေနာပြီး ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ အဲလိုမဖြစ်အောင် အရမ်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးမစည်းပဲ ခပ်မြင့်မြင့်နဲ့ရော့ရဲရဲလေးပဲစည်းတယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပို သက်သာပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရိုးကျစ်ဆံမြီးနဲ့မတူတာက ငါးရိုးကျစ်ဆံမြီးက ပိုပြီး လူငယ်ဆန်သလို ဘယ်လိုနေရာမျိုးနဲ့မဆို ပွဲတိုးပါတယ်။ တကယ်လို့ကမ်းခြေမှာ ရေကူးမယ်ဆိုရင် ဒီလို စည်းတာက အရမ်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေပွသွားရင်တောင် ပွတဲ့အတိုင်းလေး ကြည့်ကောင်းနေမှာက ငါးရိုးကျစ်ဆံမြီးလေးပါပဲ။
ဒါက ဆံပင်အုံထူတဲ့သူတွေအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ ခုနကပြောသလို ဆံပင်အကုန်စည်းရင် ဦးရေပြားနာတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် တစ်ဝက်ပဲစည်းတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုစည်းတာက လူငယ်လည်းဆန်သလို ချစ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်တာသက်သာပြီး စည်းရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
၅. Beach Waves
ဆံပင်ကို လှိုင်းတွန့်အကောက်လေးတွေက နွေရာသီနဲ့အတော်လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံလို့ဆိုရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကမ်းခြေတွေသွားရင်ပေါ့။ ဆံပင်အဖြောင့်တွေက လေအရမ်းတိုက်ပြီး သဲတွေကပ်သွားရင် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ မလှတော့ပါဘူး။ beach wave တွေက နဂိုထဲက ပွပြီးသားမို့လေတိုက်ရင် ပိုတောင်လှပါသေးတယ်။ အပူချောင်းနဲ့ကောက်လိုက်လို့ရသလို တခြားနည်းလမ်းနဲ့လည်း တစ်ခါကောက် ကောက်လို့ရပါတယ်။ ကောက်နည်း Video လေးအောက်မှာ share ပေးထားပါတယ်။
ကလေးလက်လေးတွေလို နူးညံ့တဲ့လက်လေးဖြစ်လာစေဖို့ နည်းလမ်း (၅) သွယ်
Halloween day အတွက်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ Decorations (၆) မျိုး
၂၀၁၈မှာ ခေတ်စားတဲ့ Glitter တွေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ရမလဲ…